Guddiga Qaran ee ka-hortagga COVID-19 oo kulan degdeg ka Yeeshay xakameynta Covid-19. - Horseed Media • Somali News
Guddiga Qaran ee ka-hortagga COVID-19 oo kulan degdeg ka Yeeshay xakameynta Covid-19.
Xubnaha guddiga Qaran ee ka hortagga Covid-19 ayaa sheegay Kulan ka dhacay xagga khadka internet-ka (video conference) waxaana looga hadlay wax ka qabashada xaaladaha taagan, dadaallada naf-badbaadinta, muhiimadda ay leedahay wacyi-gelinta bulshada iyo gargaaridda dadka nugul ee cudurku uu ku yeelanayo saameynta dhaqaale.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo shirka guddoomiyay ayaa faray wasiirrada Qorsheynta, gargaarka iyo arrimaha gudaha in Hey’adaha dalka ka howl gala ay ku war geliyaan inay gargaaraan dadka danta yar ee dhibaatadu kasoo gaareyso saameynta COVID-19.
Ganacsatada Soomaaliyeed ayuu Ra’iisul Wasaaruhu ka codsaday inay qaybtooda ka qaataan kaalmeynta dadka nugul. sidoo kale waxa uu guddiga faray in sare loo qaado wacyi gelinta bulshada iyada oo ay ka qayb qaadanayaan Culimada, dhaqaatiirta iyo dhammaan dadka indhaha u ah bulshada, si dadka Soomaaliyeed ay wax badan uga ogaadaan cudurka, ayna qayb uga noqdaan dadaallada lagu xakameynayo.